के कुलमान राजनीतिमा जान लागेका हुन ? ओली सरकारले प्राधिकरणमा नियुक्त नगरे यस्तो छ तयारी — Imandarmedia.com
के कुलमान राजनीतिमा जान लागेका हुन ? ओली सरकारले प्राधिकरणमा नियुक्त नगरे यस्तो छ तयारी
काठमाडाैं । देशलाई लोडसेडिङमुक्त गरेर लोकप्रिय बनेका कुलमान घिसिङले राजनीतिमा चाँसो देखाएका छन् । उसो त उनलाई अझै नेपाल बिदधुत प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर उर्जा क्षेत्रमा अझै केहि गर्न मन छ ।
‘यदि जनचाहनालाई कुल्चिदै सरकारले तपाईंलाई कतै पनि नियुक्ती दिएन भने तपाईंका व्यक्तिगत योजना के छन् ? जनताले तपाईंलाई कस्तो भूमिकामा देख्न पाउलान् ?’ भन्ने प्रश्नमा कुलमान भन्छन- ‘मलाई कुनै हतारो छैन ।’
पछिल्लो समय लगातार वर्षातले गर्दा विद्युत पूर्वाधारहरुमा क्षति पुगेर लाइन काटिने क्रम बढेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । यस्ता घटनामा चाँडोभन्दा चाँडो रेस्पोन्स नगरेमा जनगुनासो स्वभाविक हुने उनको भनाइ छ ।